Muuri News Network » NEWS: Digil iyo Mirifle oo Go’aan lama filaan ah qaatay wacadna ku maray dagaal haddii…
NEWS: Digil iyo Mirifle oo Go’aan lama filaan ah qaatay wacadna ku maray dagaal haddii…
Shir aay albaabada u xiran yihiin oo aay maanta ku yeesheen xildhibaanada, oday dhaqameedka, iyo siyaasiinta beelaha Digil & Mirifle ayaa mar dhow la soo gaba gabeeyay.
Beesha D&M ayaa wacad ku maray in aanay marnaba qaadaneyn oo aay dagaal ka xigaan in deegaan wax lagu qeybsado. Qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka D&M ayaa sheegay in aay dhiig iyo maalba ku bixinayaan inaanan xaqooda la duudsiyin.
Dadka ka faalooda siyaasadda ayaa sheegaya in aay tani tahay bilow dagaal dheer oo uu dhiig badanku daato, ilaa Soomaalida aay garawsadaan in nidaamka federaalka ah aanu wax colaad ah mooyee uusan keeni doonin wax anfac ah.
Dadka qaar ayaa qaba in aay Soomaaliya maanta u baahan tahay in la helo waddo ka duwan midda hadda lagu raadinayo siyaasad waarta, waxa aayna ku baaqeen in bacdamaa baarlabaanka hadda jira uu ku dhisan yahay 4.5 loo daayo halkiisa ilaa laga helayo nidaam la isku waafaqsan yahay oo lagu gaari karo xal waara, isla markaana muddo kordhin laba sano ah loo sameeyo baarlabaanka hadda jira ilaa laga helaayo xildhibaano lagu soo doortay qof iyo codkiis (one person -one-vote)